Adeegga Khadka Tooska ah ee Shiinaha iyo wakiilka | Sunson
Adoo la shaqeynaya Hongkong ilaha hawada ee xasiloon iyo kuwa hogaaminaya saadka ee wadamada yurub iyo Mareykanka, SunsonExpress Direct Line waa adeeg isku dhafan iyo boosteejo ah oo ah qaabka loo yaqaan DDP (Declare Duty Paid). Waxaan ka codsaneynaa duulimaad toos ah Hongkong illaa marinka iridda maalin kasta waxaanna qabannaa isla maalintaas nadiifinta caadada. Waa 100% si buuxda u xakameynaysa xamuulka hawada iyo gaarsiinta maylkii ugu dambeeyay ayaa la heli karaa taas oo ah xalka dhaqaale ee keenista degdegga ah kaas oo inta badan loogu talagalay xirmooyinka ganacsiga e-commerce.
Buuxinta Kaamil Ahaanta Shiinaha ilaa Brazil
Khadadka khaaska ah ee Sunson ee dalka Baraasiil wuxuu isku daraa ilaha duulimaadka ee Hong Kong oo tayo sare leh iyo adeegga boostada ee reer Brazil, taas oo ah xulasho maraakiib qiimo-ool ah oo loogu talagalay Brazil. Waxay si fiican u qabataa marka la eego xawaaraha gaadiidka iyo heerka gaarsiinta, baakadana waa lala socon karaa inta lagu jiro hawsha oo dhan. Waa xulashada ugufiican ee loo raro Brazil.
Lambarka adeegga Waqtiga safarka
(maalmaha shaqada) Waxyaabaha la aqbalay Qiimaha la sheegay ee la adeegsan karo
BR-TAHRIIB 10 ~ 20 Maraakiibta guud
dhoofinta dareeraha ah & sameynta Qiimaha lagu dhawaaqay ＜ 50USD waa laga dhaafay canshuurta iyo VAT
Buuxinta Kaamil Ahaanta Shiinaha ilaa Maraykanka
Si loogu qanciyo macaamiisha xalalka gaadiidka ee xawliga ku socda oo kharash-ku-ool ah oo ka yimaada Shiinaha ilaa Mareykanka, Sunson's US Line wuxuu isku daraa ilaha maraakiibta ee tayo sare leh Mainland China iyo Hong Kong, iyo sidoo kale DHL iyo USPS gaarsiinta terminal iyo adeegyada nadiifinta kastamka ee Mareykanka, oo si weyn u wanaajiya waqtiga dhowrista iyo yareynta kharashka Gaadiidka, macluumaadka raadraaca ayaa la heli karaa ka dib markii amarka la soo rogo, hawsha oo dhanna waa lala socdaa. Waxay aqbali kartaa alaabada batteriga iyo waxyaabaha dareeraha ah. Waxay ku habboon tahay rarida alaab qiimo sare leh iyo waqti xasaasi ah.
US-KHARIIF 9 ~ 14 Maraakiibta guud
dhoofinta dareeraha ah & sameynta Qiimaha la caddeeyay ＜ 800USD waa laga dhaafay canshuurta iyo VAT
Oofinta Kaamil Ahaanta Shiinaha Ilaa Israa'iil
Khadadka gaarka ah ee Sunson ee Israel wuxuu isku daraa ilaha tayada sare ee duulimaadyada Hong Kong iyo adeegga xawaaraha maxaliga ah ee Israel. Khadku waa xasilloon yahay. Ka dib dhalmada, nambarka raadraaca isla markiiba waa la bixiyaa. Nidaamka raadraaca oo dhan waa la damaanad qaaday. Qiimuhu waa wanaagsan yahay oo heerka gaarsiintu wuu sarreeyaa. Si laguu siiyo khibrad gaadiid dhaqso iyo dhaqaalaba leh, waad aqbali kartaa badeecooyinka batteriga, alaabada dareeraha ah, waa xulashadaada ugu fiican ee Shiinaha ilaa Israa'iil.
Xeerka Maraakiibta Waqtiga safarka
IL-QAADASHO 10 ~ 15 Maraakiibta guud
dhoofinta dareeraha ah & sameynta Qiimaha lagu dhawaaqay ＜ 75USD waa laga dhaafay canshuurta iyo VAT
Shiinaha Ilaa Brazil Khadadka Tooska ah